Amanzi Amanzi Obuxoki Discus Fish | Ngeentlanzi
Uhlobo lwentlanzi idiski engeyonyani okanye iHeros severus Luhlobo lwamanzi amnandi kunye nophawu oluthambileyo. Ngesi sizathu kufanelekile ukuba ukwazi ukuhlala kunye neentlobo ezinobungakanani obufanayo kwii-aquariums. Iintlobo ezinje ngeeDisco, iintlanzi zika-Oscar kunye nezikali zesayizi ezaneleyo. Inkqubo ye- amadoda adla ngokuba makhulu nangamaphiko amade ngakumbi kunabafazi.
Inkangeleko yayo ijikelezwe kodwa ucinezelwe kamva. Yiyo loo nto ibizwa ngokuba yidiski engeyiyo, ngenxa yokufana kwayo kakhulu kolu didi. Umbala wayo uyahluka phakathi kwee-shades ezahlukileyo ezisuka kuluhlaza ziye kumbala omdaka kwaye zibomvu zibomvu. Inoluhlu lwemigca ethe nkqo. Oku kuyomelela kuxhomekeke kwimeko yentlanzi.
1 Ulondolozo kwi-aquarium
2 Ukuveliswa kwakhona
Ukugcina idiski engeyonyani kwi-aquarium ufuna enkulu. Akukho ngaphantsi kweelitha ezingama-200. Amanzi kufuneka abe ithambile ngokuphakathi kwaye ine-asidi encinci. Nangona ikwaqhelana namanzi angathathi hlangothi kunye nenani elikhulu leetyuwa. Amaqondo obushushu kufuneka ajikeleze phakathi kwama-26 nama-28º. Ifikelela kubungakanani beesentimitha ezingama-20.
Yindidi ye-omnivorous. Ke ngoko, ukutya kwabo kufuneka kwenziwe imifuno. Inokulayishwa kunye nokutya okomileyo. Kwaye inokugqitywa nge- ukutya okuphilayo okanye okubandayo. Nangona ukutya kwakhe kungabonakali ngxaki inkulu.
El heros severus okanye idisco engeyonyani inokuzala ekuthinjweni. Njengomgaqo oqhelekileyo, izibini ezizinzileyo ziyenziwa. Nangona kunjalo, eyona nto inzima kukwenza isibini kuba ayingawo onke amadoda nabasetyhini abahambelana.
Emva kokulungiselela ukubeka, kwindawo ethe tyaba. Oku kunokwenzeka fikelela kumaqanda angama-400 Ukuqandusela malunga neeyure ezingama-48. Imibungu emva kokuqanduselwa igcinwa sisibini kwimingxunya eyombiwe kufutshane nelitye elikhethelwe ukubekwa.
Njenge-discus fish, i-fry igcinwa ngabazali babo iiveki ezimbini ukuya kwezintathu. Kwaye emva kweentsuku ezintathu okanye ezine banokuba sele besondla ukutya okuyimpuphu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi akwariyam akwariyam » Amanzi Amanzi Obuxoki Olahla Intlanzi